Kooxda Real Madrid oo mar kale noqotay horyaalka qaaradda Yurub 2017 [Sawirro] | SAHAN ONLINE
Kooxda Real Madrid oo mar kale noqotay horyaalka qaaradda Yurub 2017 [Sawirro]
Kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa noqotay kooxdii u horeysey ee difaacata koobka ay haysatay tan iyo sanadkii 1990,kooxda ayaa sabtida ku guuleystay koobka Champions League ee horyaalka naadiyada Qaaradda Yurub kadib markii 4-1 uga adkaatay kooxda Juventus ee ka dhisan dalka Talyaaniga.
Xiddiga Cristiano Ronaldo ayaa goolkii ugu horeeyey ciyaarta dhaliyey,wuxuuna gool kale dhaliyey qaybtii labaad ee ciyaarta iyada oo guud ahaan goolasha Real Madrid ay dhalisay ahaayeen 4 goal.
Kooxda Juventus ayaa isla qeybtii hore ee ciyaarta keentay goolkii barbaraha oo ahaa mid aad u qurux badan,waxaana u saxiixay ciyaaryahanka reer Croatia Mario Mandzukic.
Goolasha labada ah ee ay guushu ku raacday kooxda Real Madrid ayaa yimid isla qaybtii danbe ee ciyaarta ,waxaa kala dhaliyey Casemiro iyo Marco Asensio oo gadaal ka soo galay ciyaarta.
Tababaraha kooxda Real Madrid Zidane oo isagu honey ugu ciyaari jirey kooxda Juventus ee uu xalay dhulka ku jiiday ahaydna kooxdii Real Madrid kasoo gadatay sanadkii 2001,wuxuuna horay ugu qaaday koobka horyaalka Yurub sanadkii 1997.
Guushii xalay ayaa ka dhigeysa tababarihii u horeeyey ee ku guuleysta laba xili ee isku xiga horyaalka qaarada Yurub,muddo dheer ,isaga oo horey usoo hantay koobka Laliga ee horyaalka naadiyada Spanishka.
Kooxda Real Madrid ayaa noqoneysa kooxda ugu badan ee ku guuleystay koobka horyaalka qaaradda Yurub,waxayna ku guuleystay 12 jeer.
Kooxda Juventus ayaa Finaalkii shanaad oo yimaadaan ciyaarta Champions League ee laga guuleysto,waana kooxda guuldarrada hoggaamineysa.